Sidee ayuu u dhici doonaa munaasabadda duugta Amiir Philip? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Sidee ayuu u dhici doonaa munaasabadda duugta Amiir Philip?
Qoraalka sawirka,Munaasabadda duugta waxay ka dhici doontaa St George’s Chapel oo ku taalla Windsor Castle
Waxaa socota diyaar garowga duugta Amiir Philip, oo ah seyga Boqorad Elizabeth II, kaas oo geeriyooday shalay isagoo jira 99 sano.
Faahfaahinta duugta ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalmaha soo socda, balse waxaa la filayaa inay noqon doonto munaasabad, oo aysan noqon doonin arin weyn oo dalka u taalla sidii lagu yaqaannay geerida qof boqortooyada ka tirsan.
Dowladda UK ayaa ku dhawaaqday in calamada hoos loo dhigi doono dhammaan dhismooyinka dowladda ilaa 08:00 BST maalinta xigta duugta.
Royal Standard, oo calaamad u ah qarannimada iyo sii socoshada boqortooyada, weligiis hoos looma dhigayo si buuxda ayuuna uga taagnaan doonaa halka ay joogto Boqoradda.
Rasaas ayaa maanta laga riday UK iyo Gibraltar. Qoryaha milatariga ayaa 41 rasaas ka ridayay markiiba daqiiqad walba muddo 40 daqiiqo ah gudaha Edinburgh, Cardiff, London, Hillsborough Castle oo Waqooyiga Ireland ah iyo Devonport iyo Portsmouth.
Maraakiibta Ciidamadda Badda Boqortooyada, oo ay ku jiraan HMS Diamond iyo HMS Montrose, ayaa sidoo kale ridayay rasaasta, iyagoo ku maamuusaya Amiirka, oo sarkaal ciidamada badda ahaa intii uu socday Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Iyagoo xushmad u muujinaya, axsaabta siyaasadeed ee ugu waaweyn England, Scotland iyo Wales ayaa joojiyay ololaha doorashooyinka bisha soo socota dhacaya.
Markii Amiirku ay is alkunteen Amiirad Elizabeth sanadkii 1946, wuxuu ka tanaasulay howshii uu Giriigga u hayay wuxuuna noqday muwaaddin Ingiriis ah, isagoo qaatay magaca reerka hooyadiis ee Mountbatten.
Qoyska Mountbatten ayaa sidoo kale lagu muujiyay calanka, iyo sidoo kale qoryaha Magaalada Edinburgh – wuxuu Amiirka Edinburgh noqday markii uu guursaday.
Yaa ka soo qeyb geli doona aaska?
Markii hore sidii uu qorshuhu ahaa maalmaha ka dambeeya geerida amiirka waxaa ka soo qeyb geli lahaa kumannaan qof oo isugu imaan lahaa London iyo Windsor, iyadoo xitaa dadka qaar ay ku hoyan lahaayeen bannaanka halka ay ka dhacayso munaasabadda duugta.
Boqollaal ka tirsan ciidamada ayaa sidoo kale waddooyinka socod ku mari lahaa iyagoo xushmad u muujinaya amiirka, iyadoo kumannaan booliiska ka tirsanna ay xakameyn lahaayeen bulshada isu imaaneysa.
Balse tan iyo intii uu bilowday xanuunka safmarka ah, qabanqaabiyeyaasha ayaa ka taxadarayay qorshooyinka sababaya in dad badan ay isku yimaadaan haddii uu dhinto Amiirka.
Boqoradda ayaa haatan la sheegay inay ka fekereyso wax ka beddelka qorshooyinka munaasabadaha duugta, iyadoo la raacayo talooyinka dowladda ee kala fogaanshaha dadka.
Maalinta duugta, waxaa la rumeysan yahay in naxashkiisa wax yar loo jirsiin doono St George’s Chapel.
Xayiraadaha Coronavirus ee England waxay dhigayaa in keliya 30 qof, oo ilaalinaya kala fogaanshaha bulshada loo oggolaan doono inay ka soo qeyb galaan.
Faahfaahinta ku saabsan martida lagu casuumay amaba xubnaha qoyska weli laguma dhawaaqin.
Si kastaba, Amiir Harry ayay u badan tahay inuu ka soo qeyb galo. Amiirka Sussex wuxuu haatan Mareykanka la joogaa Amiiradda Sussex kumana soo laaban UK tan iyo sanadkii hore intii uu iska casilay mansabkiisii boqortooyada.
Sidee ayuu u dhici doonaa munaasabadda duugta Amiir Philip? was last modified: April 11th, 2021 by Admin